Ukubheja kwezemidlalo sekuyisikhathi eside kuthandwa emazweni ahlukene, ngakho-ke inani le-BC landa ngokushesha. Isilinganiso sababhuki baseKazakhstan sizosiza ukuthi sinqume ukuthi kungcono ukubheja ukuze uthole ukunqoba okuhle. Nakuba kuningi labo, kodwa akuwona wonke umuntu ongaqinisekisa ukuthi kungenzeka ukuthola imali ethembekile.
Ukulinganisa kwamahhovisi amabhuki eKazakhstan kuhlanganisa kuphela i-BK engcono nefanelekayo. Kumele uqaphele ukuthi phakathi kwazo azikho amahhovisi amancane okuvame ukukhohlisa abadlali, ukuthatha yonke imali ngokwabo. Ukulinganisa kwabathengi baseKazakhstan, inani elikhulu kakhulu, liqinisekisa izinga lomsebenzi futhi okubaluleke kakhulu - ukungabi khona kwenkohliso kule BC engezansi. Uhlu lwenziwa ngokucabangela impendulo, kanye nezilinganiso zabadlali, ngakho-ke asikho isizathu sokungabaza.
Ukulinganisa jikelele kwamahhovisi amabhuki eKazakhstan kufaka phakathi izinketho eziningi lapho ungakwazi ukubheja khona, kodwa okuhle kakhulu kubhalwe ngezansi. Laba baholi abahlanu abazange bavumele abadlali babo ukuba bashiye isimo sengqondo esibi. BC nsuku zonke ukuthola ukuthandwa, futhi ngenxa yalokho, inani labasebenzisi abashiya imibono mayelana nomsebenzi wokuphatha futhi, ngokujwayelekile, mayelana nezinhlangano, ukwanda.
Kulinganisweni yamahhovisi amabhuki aseKazakhstan lapho kuqala khona ukungena kwi-BC "Paris Match", eyaziwayo hhayi kuphela eKazakhstan, kodwa naseCIS. Selokhu isebenza kusukela ngo-2000 futhi namuhla isivele inamabhethi amaningi ensimini yeRashiya Federation, Kazakhstan, Moldova naseBelarus.
"I-Paris Match" ingaziqhenya ngokutholakala kwelayisense esemthethweni, kanye nenombolo enkulu kakhulu yempendulo emihle evela kubadlali bangempela. Ihhovisi linikeza ithuba lokukhetha ngezindlela eziningana ukugcwalisa i-akhawunti yegeyimu nokuhoxisa izimali ezithembekile. Kumele kuqaphele ukuthi ngenxa yezihlukahlukene zalezi zindlela, izakhamizi zamazwe aseCIS namanye amazwe angenza imisebenzi yezimali kalula "kwi-Paris Match".
Phakathi kwezinye izinto, i-BC inikeza ithuba lokusebenzisa hhayi kuphela ikhompiyutha, kodwa futhi inguqulo yeselula, ekhombisa nezenzakalo ezehlukene, ibhonasi yokuqala ehloniphekile, ukukhushulwa okuvamile kanye nohlu olubanzi.
Ukulinganisa kwamahhovisi amabhuki e-Kazakhstan endaweni yesibili kufakwe "iZenith", njengoba izinzuzo kulo zingatholakala kakhulu kunabanye abakhiqizi bezwe. Isayithi isebenza ngamahora angu-24 ngosuku kanye nezinsuku ezingama-365 ngonyaka, azikho ama-breaks. Kumele kuqashelwe ukuthi ngisho nangomsebenzi wezobuchwepheshe, kunezinkinga ezingavamile ngokwenza umsebenzi wesayithi ngokwawo, kodwa uma inkinga isenzeka, isevisi yokusekela ishesha ngokushesha.
Izinhlobo eziningi zebhayisikili kanye nokuwina okuqinisekisiwe yizinzuzo eziyinhloko zeZenit. Abalingani bekampani basebenza emazweni ahlukene, ngakho-ke inani eliphezulu lamathuba ekubheja lihlinzekwa.
Ukugcwaliswa kabusha kwe-akhawunti yegeyimu nokuhoxiswa kwezimali ezivela kuso kwenziwa ngokushesha kakhulu. Ngaphezu kwalokho, i-BC inikeza ithuba abadlali ukufaka kukhompyutha yabo noma smartphone isiphequluli sokukhiqiza kwabo, okuzokwenza kube lula ukubheja. I-version yesayithi esemthethweni yamadivaysi eselula ayifani nekhompyutha eyodwa, ngakho-ke, uma kungekho ikhompyutha noma i-laptop, akufanele kuthukuthele. Ihhovisi likhathalela ukwenza kube lula kubadlali ukubheja nganoma isiphi isikhathi nasendaweni noma iyiphi indawo.
Ukulinganisa kwamahhovisi abhuki abakhulu kunazo zonke eKazakhstan kunikezwe indawo yesithathu kuyo yonke ihhovisi elidumile elithi "Leonbets", okuyisinye sezinkonzo zokuqala eYurophu. Ibhuki, okokuqala, libhekwa yisixhumanisi esiyisisekelo, esingaba khona noma ubani osanda kufika. Ngisho nomsebenzisi ongajwayelekile ngekhompyutha ngeke enze umzamo omkhulu ukuya kwisayithi, enze ukubheja futhi athole ukunqoba.
Zonke izinkokhelo zenziwa ngamaminithi, ngisho nasezinkingeni zokulayisha indawo. Abadlali abakhuthele njalo bathola imiklomelo efanelekayo ngebhonasi noma ama-round sums for imisebenzi yabo. Futhi kuyadingeka ukuba unake izinyathelo ezivamile lapho ulawulo ludlala khona imiklomelo emihle. Zihlanganisa: i-iPhones, amaphilisi, izimpahla zezemidlalo nokunye okunye.
Njengoba sekushiwo ngenhla, bonke ababhuki abaholayo bahlanganiswa nokulinganisa kwababhuki eKazakhstan. Uhlu lubeka indawo yesine ehhovisi, elinikezela ngokubheja phambili.
Okuthandwa kakhulu lapha kwakubizwa ngokuthi "i-Football roulette". Okubalulekile ukuthi umdlali kufanele aqagele umcimbi wokuqala, okuzokwenzeka kumdlalo oseduze (ukujeziswa, ukususwa, ukujeziswa nokunye okunye).
Amabhonasi nezenzo azishiyi noma ubani ongathandi. Kuzo, ngempela, ungathola imali eningi futhi uyihoxise masinyane ukuze uchithe ngokuthenga okufisayo.
Isikhundla sokugcina kulolu hlu sithathwe yi-BC "Fonbet". Phakathi kwezinzuzo zalo ukukhethwa okuhle kakhulu kwemicimbi yezemidlalo emidlalweni evamile kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kukhona ukubheja okubukhoma, okulula kubo bonke abadlali uhlelo lokugcwalisa i-akhawunti yegeyimu nokuhoxiswa ngokusebenzisa ikhadi lebhange noma isikhwama se-electronic. Naphezu kokuthi wonke umdlali uyazi ukuthi kukhona i-Fonbet BC, kodwa noma yisiphi isivakashi sizothola injabulo futhi sizuze ukuxhumana nayo noma kunjalo.
Yemidlalo Yeshashalazi Yase Musical Comedy (Kharkiv): umlando, ikheli kanye repertoire